UPDATED -- မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သူဖြစ်စေ ၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာများဖြစ်စေ။ ၃ လ အတွင်း ငွေ ကျပ်(၉)သိန်း ဘယ်လိုရှာကြမလဲ. . . ? ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Pc Game , အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းများ » UPDATED -- မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သူဖြစ်စေ ၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာများဖြစ်စေ။ ၃ လ အတွင်း ငွေ ကျပ်(၉)သိန်း ဘယ်လိုရှာကြမလဲ. . . ?
UPDATED -- မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သူဖြစ်စေ ၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာများဖြစ်စေ။ ၃ လ အတွင်း ငွေ ကျပ်(၉)သိန်း ဘယ်လိုရှာကြမလဲ. . . ?
Tuesday, October 15, 2013 Pc Game, အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းများ
မင်္ဂလာပါ လို့ ရှေ့ဦးစွာ ပြောပါရစေ။
အခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းကတော့ တစ်ရက်ကို အင်တာနက်အသုံးပြုချိန် (၅)မိနစ် နဲ့ ၁၀ ဒေါ်လာ ရှာမယ့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လှပါလာား . . . ဘယ်လိုဖြစ်နိူင်မလဲလို့ မေးစရာပါ။ နည်းလမ်းကတော့ အမျိုး မျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနည်းကတော့ Website ရဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာတစ်ခုကို စက္ကန့် ၃၀ ကြာပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ၂ ဒေါ်လာရမှာပါ။ တစ်ရက်ကို ကြော်ငြာ (၅)ခု ကြည့်ခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒီ http://www.twodollarclick.com/index.php?ref=yenaingoo ကို ကလစ်ပြီး အဲဒီ website ကိုသွားပါ။
အလားတူ တစ်ခြားကြော်ငြာကို ကလစ်ပေးရမှာပါ။ စက္ကန့်ပေါင်း ၁၅၀ ကြာမြင့်ရုံနဲ့ ၁၀ ဒေါ်လာရမှာပါ။
တစ်ရက်ကို ၁၀ ဒေါ်လာ ၊ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပါ။ မြန်မာငွေနဲ့တော့ မတွက်တတ်လို့။ တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာ :D ။
IP address – 203.33.22.1 ဆိုတဲ့ တစ်ခု တည်းနဲ့ အကောင့်တစ်ခုထက် ပိုမသုံးမိပါစေနဲ့။ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးတည်းကနေ ကောင့်အများကြီး မသုံးပါနဲ့။
ကျွန်တော်ပေးတဲ့ လင့်ခ် ကနေပဲ Sign up လုပ်ပေးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာဖတ် ၁၀ ဒေါ်လာ ရရင် သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ၁ ဒေါ်လာ ပေးမှာမို့လိုပါ။ စာဖတ်က တစ်ခြားကနေ မှတ်ပုံတင်ရင်လည်း သူတို့ စာဖတ်သူကို For Rent-- အနေနဲ့ ရောင်းစားဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ အောက်က လင့်ခ်ကို ကလစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
- လရှောင်ဒေါင်ခေါင် (၂၈.၇.၂၀၁၃)
တကယ်လို့များ View Ads ကို ကနေတစ်ဆင့် ကြေငြာ ကြည့်နေလျှက် Time Counter က ဘက်မှာ တစ်ခုခု ချို့ယွင်းတယ်(connection ကြောင့်)ဆိုရင် View Ads ကို ထပ်ကလစ်ပေးပါ။ Refresh View Ads page ပေါ့ဗျာ။
မရလိုက်တဲ့ ကြေငြာ ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ပေးတ့လင့်ခ်ကနေ မှတ်ပုံတင်(register) လုပ်ပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။